I-China LH-BM1000L Izendlalelo Ezingu-1-6 Zamanzi Ukukhiqiza Umshini Wokubumba Nefektri |IsiLuhong
I-LH-BM1000L 1-6 Izendlalelo Umshini Wokubumba Ithangi Lamanzi
Umshini wokubumba wethangi lamanzi we-1000L ungakhiqiza amathangi amanzi e-PE&HDPE ukusuka ku-200L kuye ku-500L, amathangi wamanzi ayizingqimba eziyi-1-6.
1.Izinga lokushisa elilawulwa yi-Seimens PLC,i-extruder iyama ngokuzenzakalelayo uma izinga lokushisa liphansi ngenxa ye-heater noma ama-thermocouples alimele.
2.Kukhona ukuhlolwa kokucindezela kwekhanda lokufa ku-diehead.I-PLC idubula phansi ama-extruders uma ukucindezela ngaphakathi kwekhanda lokufa kuphezulu kakhulu.
3.Ama-extruder anamakhava okugcina izinga lokushisa, ngakho angenza isikhathi sokushisisa sibe sifushane
I-4.Izinga lokushisa lilawulwa yi-Siemens brand.
5.I-extrusion motor ingumkhiqizo we-Siemens.
6.I-inverter wuphawu lweSeimens
7.Ukuvikeleka okwengeziwe ohlelweni lokulawula
Yamukela umklamo omusha ohlanganisiwe wekhanda le-multi-layer die, kusukela ku-1 ungqimba kuya ku-6 izendlalelo, ukuze uqinisekise ukujiya kodonga oluzinzile.Ukukhiqiza komshini wokubumba ukuqhuma kuthuthukisa izikhathi ezingu-5 kunomshini wokubumba we-blow wendabuko kanye nezinga lokusebenzisa izinto zokuvuselela kabusha lithuthuka izikhathi ezingu-4.
3. Ngemva Kwesevisi Yokuthengisa
Umthengi angathumela ama-opharetha abo efekthri yethu ukuze aqeqeshwe, okuhlanganisa ukusebenza komshini, ukulungiswa nokulungisa okulula;Noma onjiniyela bethu bangaqeqesha ama-opharetha omthengi efekthri yomthengi ngezikhathi zokufaka nokulungisa.
Umthengisi angathumela unjiniyela ngokumelene nezicelo zomthengi zokuthi afake futhi alungise imishini isonto elilodwa efektri yomthengi. Umthengi kufanele abhukhe kusengaphambili ngaphambi kokulethwa kwemishini.
Umthengi kufanele akhokhele izindleko zesicelo se-visa kanjiniyela, amathikithi endiza eyindilinga, ukudla nebhodi ngaphambi kokuhamba kwakhe.
3.LH-BM1000L Vuthela Umshini Wokubumba Izici zobuchwepheshe
35KG (Ngokwesisindo somkhiqizo)
Okwedlule: I-LH-BM160L 1-3 Izendlalelo Evula Umshini Wokubumba Wokuvula Isigubhu Phezulu
Olandelayo: I-LH-BM2000L 1-6 Izendlalelo Umshini Wokubumba Ithangi Lamanzi
I-LH-BM3000L 1-6 Izendlalelo Zethangi Lamanzi Vuthela Ukubumba I-M...
LH-BM10000L 1-6 Izingqimba Zamanzi Tank Vuthela Ukubumba ...
I-LH-BM2000L 1-6 Izendlalelo Zethangi Lamanzi Vuthela Ukubumba I-M...
LH-BM5000L 1-6 Izendlalelo Ithangi Lamanzi Vuthela Ukubumba I-M...